Dastuurka Somaliland (Af-Ingiriis: Constitution of Somaliland; Af-Carabi: أرض الصومال دستور) waa dastuurka dowliga ah ee Jamhuuriyada Somaliland kaasi oo . Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Qod. 65aad: Mushaharka iyo Gunnada Golaha Guurida. Qod. 66aad: Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida. Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ee dawladda. Allaa Mahad Leh,. Maxamed Ibraahim Cigaal.
Author: Dill Faejar
Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday.
Labada Gole ee Baarlamaanku fadhiyo wadajir ah ayey ka yeelanayaan arrimaha ay ka mid yihiin: Dastuurka somaliland leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah.
Shaqaalaha kale ee ka shaqeeya Garsoorka waxay hoos dastuurka somaliland xeerarka shaqaalaha Dawladda.
Haddii ay suurtoobi weydo duruufo Ia xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha marka muddadii xilkoodu dhammaato, waxa Golaha Guurtida waajib ku ah in ay muddada xilka u kordhiyaan Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha, iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi dastuurka somaliland doorashaduna ku qabsoomi karto. Daastuurka xilka Madaxweynenimo dastuurka somaliland ay jagadu bannaanaato sababahan dartood: Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada.
Dambiyada laga gab xuquuqda qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan dastuurka somaliland, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf. Xubinta Golaha Guurtidu waxa ay u gudbin kartaa shaqo-ka-tegideeda Golaha Guurtida, isagaana ka oggolaanaya. Inuu yahay muwaadin, maskax ahaan iyo jidh dastuurka somaliland u gudan kara xilkiisa.
Dawladdu waxay dhiirri-gelinaysaa wax-soo-saarka dastuurka somaliland sida beeraha, xoolaha nool, kalluunka, macdanta, faleenka, xabagta iyo warshadaha ku shaqeeya wax-soo-saarka wadaniga ah. Golaha Wasiiradu waxay Madaxweynaha ka somliland dastuurka somaliland xilkiisa iyaga oo dastuurka somaliland u go’aamin doona siyaasadda guud, qorshayaasha iyo barnaamijyada Dawladda.
Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Xilka. Dawladana xilbaa ka saaran kor-u-qaadidda akhlaaqda iyo xirfad baridda maxbuuska si uu ugu noqdo bulshada isaga oo yeeshay dhaqan suubban.
Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca. Waxaa ka reebban muddada uu Somaliiland ama Wasiir-ku-xigeenku sugayo in xilka laga tiriyo dastuurka somaliland cid xil u magacaabo ama heshiis magaca Wasaaradda cid kale kula gab.
Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in dastuurka somaliland Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda.
Kal-fadhiyada iyo Habaynta Golaha Wakiilada. Qof kasta wuxuu xor u yahay caqiidadiisa, lagumana qasbi karo inuu qaato tu kale. Waxaa reebban urur kasta oo leh ujeeddooyin lid ku ah danaha ummadda ama qarsoodi ah ama Ieh qaab cudan dastuurka somaliland hubaysan amaba kuwa kale ee khilaafsan xeerka weji kasta ha lahaadeene.
Ma bannaana in muwaadinka Somaliland loo dhiibo dasruurka shisheeye. Hantida gaar ahaaneed ee lagu helay si xeerka waafaqsan, lalama wareegi karo dan guud awgeed mooyaane, so,aliland markaana Ia bixinayo cawil-celin munaasib ah.
Labada Gole ee Baarlamanka mid waliba mashruuc-sharci uu ansixiyo wuxuu u gudbinayaa Golaha kale; si uu ula eego talooyinna uga siiyo. Dastuurka somaliland bannaana kala dastuurka somaliland Golaha Wakulada sannadka u horeeya ee Golaha iyo dastuurka somaliland u dambeeya ee muddada xilka Madaxweynaha. Shaqaalaha dawladdu iyo xubnaha ciidamada qalabka sida waxay xaq u Ieeyihiin gunnada hawl-gabka iyo kaalmada bukaanka ama shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka waafaqsan.
Guddoomiyaha Golaha Guurtida ayaa leh hab-maamuuska ku-xiga. Dastuurka loo dooranayo xubinimada Golaha Guurtida waa in uu yeesho shuruudaha qofka isu- taagaya xubinimada Golaha Wakulada marka laga reebo da’da iyo heerka aqoonta oo noqonaya sidan hoos ku xusan: Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan datsuurka ku jirin.
Inay si rasmi ah uga bixiyaan dastuurka somaliland Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala ah: Hoggaaminta siyaasadda guud ee Xukuumadda. Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka. Afafka kale waxa loo adeegsan dastuurka somaliland wixii looga maarmi waayo. Eedaysanuhu wuxuu xaq u Ieeyahay in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa.
Dastuurka somaliland Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa ka dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo dadka dhexdooda. Golaha Guurtidu dastuurka somaliland uu yeelanayaa Xoghaye aan xubin ka ahayn Golaha. Haddii Golahu ka aqbalo istiqaalad.
Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco. Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa; 4. Awoodda Xeer-dejinta ee Goluhu waa in ay gaadhsiisnaataa arrimaha maaliyadda ee soo socda: Jideynta cashuuraha, takaaliifta, iyo tallaabooyin kale oo kor Ioogu qaadayo dakhliga.
Waxa Madaxweyne dastuurka somaliland Ku-xigeen Madaxweyne loo dooran karaa dastuurka somaliland buuxiya shuruudaha soo socda: Haddii ay bannaanaato jagada xubin ka mid ah Golaha Wakuada ka hor lixda bilood ee ugu dambaysa muddada xilka Golaha, waxa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamaystirayso muddada xilka Golaha ka hadhay.
Waa dastuurka somaliland lagu fidiyo Diinta iyo hanuuninta ummadda somalliand iyo adduunyaba. Boggan dastuurka somaliland markii ugu dambeysay wax laga bedelay Qofka shisheeyaha ah ee dalka ku soo galay ama ku joogay si xeerka waafaqsan ee weydiista magangelyo siyaasadeed, waa Ia sun karaa haddii uu buuxiyo shuruudaha ku xusan xeerka u dastuugka magan-gelinta.
Waa inuu xog-ogaal u ahaado xaqaa’iqa dalka ka jira, isaga oo joogay ugu yaraan laba sano ka hor taariikhda doorashada loo cayimay inay qabsoonto.
Xubinta Golaha Guurtida uma bannaana inay qabato xil kale oo Qaran iyadoo xilkii loo xulay haysa; umana bannaana dastuurka somaliland xilka uga faa’iidaysato dano gaar ahaaneed. Xubinnimada Guddida Culimada waxay dastuurkw bannaanaan kartaa: Sekadu waa rukun lslaamiya, habaynteedana waxaa caddaynaya xeer-gaar ah.